About Franchiseek - Yakanyanya Franchise Directory | Franchise Bhizinesi
Kufunga nezve shanduko yebasa & kutenga franchise? Franchiseek.com ndeye pasi rese Franchise dhairekitori yemikana yebhizimusi yekutengesa.
Franchiseek.com yakavambwa muna1999 uye inova yeInfinity Bhizinesi Kukura Network Limited, zvakare yavo Franchise UK - iyo yakavambwa muna 2004, iyo kubvira yakakura kuva iyo huru yeUK franchise dhairekitori ine zvinopfuura chiuru mafurita inopa vaitsvaga maFrigise sarudzo yakakura mukuwana kwavo yakakodzera Franchise.
Kana iwe uri kufunga kutenga mukana wefrancise saka yedu Franchise dhairekitori ye franchise inotengeswa ichave iri rakanakisa sosi yeMAHARA franchising ruzivo.
Iva mudiwa wenhauShambadzira mukana wangu wehofisi